अस्पतालबाट डेराको यात्रा आज जसोतसो प्रबन्ध भयो । हामीहरु केही कुराको प्रतीक्षा गर्छौ । प्राप्तिसँगै पट्यारलाग्दो त्यो प्रतीक्षाको समयलाई बिर्सन्छौं । आज त्यसैगरी नबिर्सन ब्लगमा लेखिराखेको । कोठामा आइसकेपछि लागेको के हो भने यस्तो त अरुलाई पनि पर्छ। ट्याक्सी कसरी व्यवस्थापन हुँदो होला ?
गत साता श्रीमती र छोरालाई कोभिड-१९ को संक्रमण भयो । छोरालाई खासै शारीरिक समस्या देखिएन,
श्रीमतीलाई भने यो रोगले निकै दु:ख दियो । भएको के थियो भने उनी एउटा विवाह समारोहबाट स्कुटर कोठा फर्किँदा वर्षामा भिजेकी थिइन । ज्वरो आयो, रुघा लाग्यो । हामीले ठान्यौं -भिजेका कारणले हुनुपर्छ। ३/४ दिनसम्म पनि सञ्चो नभएपछि हामीले कोभिड पनि हुनसक्ने शंका गर्दै घरमा सतर्कता अपनायौं। निको नहुनु, ज्वरो र रुघाखोकी लम्बिनु, जिउ दुख्नु, खान मन नलाग्नु आदि लक्षण हाम्रा परम्परागत मौसमी रुघामर्कीका हुन् भन्ने सुनिआएको हो । तैपनि एकपटक कोभिड टेस्ट गरि हेरौं भन्ने सल्लाह गरियो ।
अघिल्लो आइतबार टेकुको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पीसीआर गराउन पुग्यौं । एक्सरे पनि गरायौं । पीसीआरको रिपोर्ट बेलुकी ८ बजे एसएमएसमा आयो - कोरोना पोजिटिभ । त्यही रात छोरालाई पनि ज्वरो आयो । मैले भोलिपल्ट उसलाई अस्पताल पुर्‍याएँ । उसको पनि रिपोर्ट पोजिटिभ।
छोरालाई जँचाउन जाँदा मैले श्रीमतीजीको एक्सरे रिपोर्ट लिएँ, ओपीडीमा देखाएँ । डाक्टरले उनलाई निमोनियाका सामान्य लक्षण सुरु भएको संकेत गरे । भने 'फोक्सोमा सेता दाग देखिन थालेका छन्। लेखेको औषधि खुवाउनुस् । झोल पदार्थमा बल गर्नुस् । आत्तिनु पर्दैन।'
मंगलबार श्रीमतीजीको अक्सिजन लेवल घट्यो । अक्सिमिटरले सामान्य अवस्थामा हाम्रो शरीरमा अक्सिजनको मात्रा ९४ देखि ९७ सम्म देखाउने रहेछ । उनको ९३ देखायो । खोकी बढ्यो । दमको समस्या भए जसरी सास फेर्न थालेपछि मैले उनलाई पीसीआर गरेकै अस्पतालको आकस्मिक कक्ष पुर्‍याएँ । तर त्यहाँ त्यतिबेला ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीले 'अवस्था गम्भीर होइन, घर जानुस्' भने । ५/६ मिनेट पैदल हिड्न लगाएर अक्सिजनको मात्रा जाँच्दा मेसिनले ९५ देखाएपछि उनीहरुले खोकी कम गर्ने औषधि लेखिदिएर पठाएका थिए । भनेका थिए - 'अक्सिजनको मात्रा ९० भन्दा तल गयो भने आउनुस् । हामी गम्भीर बिरामी हेर्छौ। उहाँको अवस्था गम्भीर छैन ।' डाक्टरका कुरा प्रतिवाद गर्न भएन । तर श्रीमतीजीलाई गाह्रो भइरहेको थियो। तैपनि हामीलाई लाग्यो - डाक्टरले भनेको मान्नु ठीक । औषधि लैजाउँ, कसो बिसेक नहोला ।
बिसेक भएन । अक्सिजन लेवल ८५ मा झरेपछि बिहीबार सवेरै हामी फेरि त्यहीँ पुग्यौं । यसपटक स्वास्थ्यकर्मीले सतर्कतासाथ उपचार सुरु गरे । अक्सिजन सपोर्टमा राखियो । छातीको एक्सरे, रगत र पिसाब जाँच गर्न लगाए । निमोनिया निकै बढिसकेको थियो । अस्पतालमै भर्ना गरेर उपचार सुरु भयो ।
कोभिड जनरल वार्डमा चार रात, पाँच दिन बिते । कसरी कसरी र त्यसबेला केके देखिए भन्ने पछि अर्को गफ गरौंला । मलाइ यतिबेला ट्याक्सीका कुरा लेख्नु छ ।
हिजो नै डाक्टरले 'घर लैजानुस्, अब आत्तिनु पर्दैन' भनेका थिए । जब जब अक्सिजनको पाइप झिक्यो, खोकी बढ्न थालिहाल्ने अवस्था कम भएको थियो । तर फेरि जोखिम कसरी लिने ? हामीले एक रात बिना अक्सिजन सपोर्ट अस्पतालमै बस्ने, अवस्था बिग्रिएन भने मात्रै डिस्चार्ज लिने निर्णय गर्‍यौं ।
आज डिस्चार्ज लिइयो । दिनको करिब १ बजे डिस्चार्ज पेपर तयार भएपछि म ट्याक्सी खोज्न थालेँ । सुरुमा आफ्नो डेरा छेवैका एकजना गुरुजीलाई फोन गरेँ, जसले अघिल्लोपटक अस्पताल ल्याइदिएका थिए । उनले यतिबेला काँडाघारीतिर रहेकाले नभ्याउने अवस्था रहेको सुनाए । अस्पताल आएका धेरैजसो ट्याक्सीहरुलाई सोधेँ, उनीहरु जसलाई लिएर आएका थिए, उनीहरुलाई नै लिएर फर्किने भेटिए । खाली भेटिएका २/३ वटाले बिरामी नबोक्ने जवाफ दिए ।
कोरोनासँग डराउनु पर्छ, सही हो । सतर्कता अपनाउनै पर्छ भन्नेमा दुबिधा पटक्कै राख्न हुँदैन । तर मैले घर लैजान लागेको व्यक्तिलाई संक्रमणको लक्षण देखिएको १४ दिन पुगिसकेको थियो । अस्पतालले 'घर लानू' भनिसकेपछि बिरामीको अवस्था अब रोग सार्ने थिएन । तर ट्याक्सी मानेनन् ।
निको भएकालाई एम्बुलेन्समा लैजाने कुरा पनि भएन । 'पठाओ' को सम्झना भयो । मोबाइल एपमा त्यसबाट ट्याक्सी खोजेँ । तुरुन्तै पाइयो । अर्डर कन्फर्म गर्नुअघि पठाओले कोभिड संक्रमित हो/होन पनि सोध्दो रहेछ । हामी संक्रमणमुक्त थियौं । त्यही अप्सन छनोट गरियो । हामीलाई लैजाने चालक र गाडी नम्बर देखायो । ट्याक्सी आउनेमा ढुक्क भयो । भाडा ३६९ रुपैयाँ पनि देखाएपछि अघिल्लोपटक आउँदाको भाडासँग तुलना गरेँ । महंगो होइन ।
बिरामी र पोको पारेका झोलाहरु बाहिर निकालियो । वार्डबाट बाहिर आएर आकस्मिक कक्ष छेउ झोला बिसाएर ट्याक्सीको प्रतीक्षा थालियो । अचानक मोबाइलमा पठाओको एपले म्यासेज देखायो - 'राइडर ह्याज क्यान्सिल ।' (चालक जान मानेनन्)
अब फेरि अघिकै अप्सन ट्राइ गर्नुको विकल्प रहेन । म अस्पतालको गल्ली छाडेर त्रिपुरेश्वर-कालीमाटी मूल सडकमा आएँ । अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको बिरामी बोक्छु भन्ने ट्याक्सी खोज्न निकैबेर लाग्यो । बल्ल बल्ल एउटा ट्याक्सी सहमत भयो । तर चालकले कोरोना सर्ने अवस्था हो/होइन भन्नेमा निकै केरकार गरे ।
जे होस् उनले गुँडमा पुर्‍याइदिए । फर्केपछि सोच्दैछु- कोरोनाले सबैतिर गाँजेको छ । जुनसुकै अस्पतालमा बिरामी बग्रेल्ती छन् । ट्याक्सी नपाइने समस्या अरुतिर पनि होला की नहोला ?
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 10:32 PM No comments:
content catagory देश परिवेश, दैनिकी
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 10:23 AM No comments:
हिजो राति एक जनाले अनलाइनमा रिवल्विङ चियर सेलमा राखेका थिए । कुर्सीको फोटो हेर्दा दाम अलि अपत्यारिलो तरिकाको सस्तो लाग्यो । बजारमा पाइनेमा आधाभन्दा पनि सस्तो ।
च्याटमा सोधेँ - तपाइँले भनेकै दाम हो ?
धेरैबेर उत्तर आएन । मलाइ लाग्यो उताको मान्छेलाई मोबाइलमा टाइप गरेर जबाफ दिन गाह्रो परेको हुनुपर्छ। अनि लेखेँ- तपाइँको नम्बर दिनुस् ।
उनले दिएको नम्बरमा कुराकानी भयो । उनले पाइने ठेगाना बताए।
आज छोरालाई मोसामा पछाडि राखेर म कुर्सी किन्न जाने भएँ । राम्रो पाए अरु साथीहरूका लागि पनि लिइदिने गरी ।
बैंक पुगेँ। कार्ड छिराएपछि एटीएममा सूचना देखियो - 'तपाइँले सीमाभन्दा बढी कारोबार गरेकाले अब पैसा दिन सक्दिन।'
जिन्नगीमा कैल्यै नदेखेको सूचना !
बाहिर निस्केँ । गार्डलाई सोधेँ - बैंकले खातामा होल्ड गर्ने पैसाको अंक बढाएको हो ? मलाइ त सीमा नाघ्यो भन्छ एटीएम !
गार्ड- सीमा ५ लाखको हो । तपाइँले एक महिनामा त्यति झिकिसक्नु भो होला ।
म - छैन । कहाँ झिक्नु त्यति !
गार्ड - भित्र स्टाफलाई सोध्नुस् ।
बैंक पसेँ । सामाजिक दुरीको लफडाले बैंकभित्र तीन हात परै रोकियो । परैबाट महिला कर्मचारीलाई भनेँ - मलाइ एटीएमले सीमा नाघ्यो भन्यो । खातामा कतिसम्म राखेर एटीएमले पैसा दिन्छ ?
उनी बडो रुखो पारामा बोलिन् - ५ लाख झिकिसक्नु भो होला । त्यो भन्दा बढी एक महिनामा निकाल्न मिल्दैन एटीएमबाट ।
म- मैले झिकेको छैन । अनि मिनिमम ब्यालेन्स कति हुनुपर्छ ?
बैंक कर्मचारी - ५ सय राखेर बाँकी निकाल्न मिल्छ ?
म - मैले सीमा नाघ्ने झिकेकै छैन । अनि मेरो कार्डमा किन एटीएमले त्यसो भनेको ? चेक गर्दिनु हुन्छ ?
बैंक कर्मचारीले रिसाएको पारामा हेर्नुभो, रिप्लाउनु भएन ।
उहाँको मुद्रा देखेर फेरि सोध्न मन लागेन।
बाहिर निस्कँदै गर्दा देखियो, भित्रबाट प्राविधिकहरूले त्यो एटीएम खोलखाल पर्दै रहेछन्। अनि भित्रको गार्डलाई सोधेँ - के हुँदै हो?
उनी बोले - एटीएमले काम गरिरहेको छैन । मर्मत चल्दैछ ।
काम त गर्दै थियो, त्यो सूचना दिने ! कारण त्यस्तो रहेछ ।
अनि दुई किमि पर्तिरको एटीएम पुगियो । त्यसले अघिल्लो जस्तो सूचना देखाएन ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 9:08 PM No comments:
एकताका लाग्थ्यो, ब्लगमा ती कुरा लेख्छु, जो खबरी कुराभन्दा भिन्न हुनेछन् । तर त्यो क्रमलाई निरन्तरता दिन सकिएन । आज फेरि यौटा लेख पढेर दिक्क लागेका बेला केही लेख्न मन लाग्यो ।
गत बिहीबार बेलुकी हामीले घर-घरबाटै अखबारका लागि काम गरेका थियौं । मैले काम गर्ने अखबारको शुक्रबारको अंकमा सूचना थियो- 'कान्तिपुर, दी काठमान्डु पोस्ट, साप्ताहिक, नेपाल र नारी पत्रिकाको मुद्रण तथा वितरण शुक्रबारपछि केही दिनका निम्ति स्थगन हुनेछन् । त्यसपश्चात् हामी दैनिक रूपमा परिस्थितिको आँकलन गर्नेछौं र हालको स्थितिमा अलिकति सुधार आउनासाथ हाम्रा पत्रिकाहरू पूर्ववत् प्रकाशित गरिनेछन् ।'
यति लेखेपछि म केमा काम गर्छु भनिरहन पक्कै पर्दैन । हाम्रा सञ्चारमाध्यम हेर्दा लाग्छ, 'महान महान हस्ती' का मात्रै छटपटी पस्कनका लागि हो, जो हामी गरिरहेकै छौं । त्यसैले नितान्त आफ्ना कुरा ब्लगतिर जतन गरियो ।
सामान्यतयाः हाम्रो बानी के छ भने जसलाई पर्खन्छौं, उसले ढिला गरे छटपटी हुन्छ । बारम्बार घडी हेर्छौं, मोबाइल थिच्छौं, फोन-म्यासेज गर्छौं । समय कटाउन साह्रै गाह्रो हुन्छ । जब उ आइपुग्छ, हामी त्यो दिक्दारी सबै बिर्सन्छौं । आवेशमा आउनेहरूका लागि प्रवचनहरूमा सुन्न पाइने राम्रो कुरा के छ भने 'तपाइँलाई रिस उठ्यो भने म किन रिसाएको हुँ ? रिसाउनु कतिको जायज हो ? नरिसाउँदा हुन्थेन र ! भनेर सोच्नू ।' सोच नै एकाग्र हुन नसकेका बेला यस्ता कुरा दिमागमा ल्याउनै सकिँदैन । ल्याउन प्रयास गर्दा पनि सजिलो पक्कै होइन । यदि सोचियो भने रिसको तापक्रम घट्छ । मान्छे सामान्य मनस्थितिमा फिर्छ । सम्भावित दुर्घटना टार्न सकिन्छ ।
क्लिनिक र अस्पताल पस्नेबित्तिकै देखिने टेलिभिजन सेट यसको एउटा प्रयास हो । आवेशमा आएको कसैको समय बाटामा केहीबेर ध्यानाकृष्ट गर्ने हरू कुरामा गए आफ्नो पुरानो तापक्रमबाट चिसिन्छ । प्रतीक्षाको केहीबेर बिरामी र तिनका कुरुवामा दुखाइ र आवेगको मात्रा घटेको महसुस गराएपछि मात्रै उपचारका प्रक्रिया थालिन्छन् । वरिपरि त्यस्ता धेरैथोक छन्, जसले हाम्रो आवेशको शिकार हुनबाट जोगिन मन भुलाइदिने वस्तु राखिएका छन् ।
लकडाउन अनुभवका गन्थन लेख्ने धृष्टता त्यही उपक्रम हो भनेर बुझौं । खुल्ला आएपछि अहिले कस्तो अनुभव गरिँदै भनेर बिर्सिहालिन्छ । सम्झना गरियो भने पनि अनुभवको तापक्रम नियन्त्रित आवस्थामै पुगेको हुनेछ ।
यतिबेला म ब्लग लेख्दै गर्दा युट्युबमा 'श्रीमद भगवद गीता सार | संपूर्ण गीता' सुन्दैछु । यति प्रष्ट भए हुन्छ यो कोही पाठक लक्षित लेखाइ होइन । आफूलाई लागेको दिक्क पोख्न समय बिताउने मेलो हो ।
गत मंगलबारदेखिका तीन दिनको हाम्रो काम गराइ सहज पक्कै थिएन । किनभने, पत्रिकाको डेस्कमा चरणबद्ध र समुहमा काम नगरे सिलसिला मिलाउन गाह्रो पर्छ । समाचार सम्पादन गर्ने, प्रुफबाट आएपछि तिनलाई निस्चित पेजमा सबमिट गर्ने, जिम्मेवारी तोकिएको पेजका लागि समाचार र फोटा ठिक्क पार्ने, पालो परेका डिजाइनरसँग मिलेर पेज तयार पार्ने । सल्लाहमा त्यसमा पुनः आवश्यक सम्पादन गर्ने । अरूले बनाएका पेज पनि हेरेर त्रुटी वा सुधारका सल्लाह दिने । डेस्क, प्रुफ र डिजाइनर गरेर २०/२२ जनाले गरिरहेको कामलाई एक्लाएक्लै घर घरबाट अनलाइन भएर काम गर्नु सहज नहुने रहेछ । तैपनि त्यो सिलसिला तीन दिन चल्यो ।
यतिबेला साथीहरू फोन कुराकानीमा भन्छन्- 'अरूले बन्द गरेका छैनन्, हाम्रोमात्रै किन बन्द ?' बन्द गर्नु हुन्थ्यो/हुँदैनथ्यो भन्ने बहसमा मजस्ता डेस्कमा काम गर्नेभन्दा वितरण र प्रेसका साथीहरूले मज्जाले बताउन सक्लान् । व्यवस्थापनले उनीहरूसँग पक्कै कुरा गरेर हाललाई प्रकाशन स्थगनको निर्णय गरेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
जेबाट जसरी पनि संक्रमण हुन सक्छ भन्ने पुष्टि नै भइसकेपछि वितरक पनि त मान्छे हुन्, उनीहरूका पनि घरपरिवार छ, जोखिमको अवस्थामा अरूले घर घरबाट काम गरेर तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीको ज्यानको सुरक्षाप्रति गैरजिम्मेवार बन्न पक्कै मिल्दैन । अहिलेका लागि जे होस् स्थितिमा सुधार आउनेछ, हाम्रो दिनचर्या पूर्ववत् नियमिततामा फिर्नेछ भनेर पर्खनुको विकल्प रहेन ।
त्यसो त कोरोनाको त्रास बढ्दै जाँदा फागुन दोस्रो सातादेखि नै बाहिरभन्दा अफिसमै धेरै सतर्कता थियो । लिफ्टको ढोकैमा ज्यानको तापक्रम जाँच, तलापिच्छे सेनिटाइजर, ट्वाइलेटमा साबुन-पानीको व्यवस्था । सधैं ३०/३५ जना भेला हुने ग्रुप मिटिङ क्यान्सिल गरेर थोरै बस्ने, काम गर्नेहरूले दुरी मेन्टेन गर्ने, हात धोइरहने र रिपोर्टिङमा काम गर्नेले 'भर्चुअल' माध्यमबाट आफ्ना विषय बताउने अभ्यास अफिसमा सुरू भइसकेको थियो ।
चैत ६ मा म घर पुगेको थिएँ । मोरङको सुन्दर हरैंचा नपा-३ लोचनी । गत बैशाखमा मैले पोखरा छाड्दा आफ्नो दसक पुरानो दुइपांग्रे वाहनलाई काठमाडौं ल्याउन उचित मानिँन । भाइलाई 'बेचिदिनू' भने । 'स्प्लेन्डर प्लस' दिवा सेवाको बसको छतमा चढेर भाइकहाँ विराट चोक पुगेको थियो । म सपरिवार संघीय राजधानी खाल्डोमा आएँ ।
फागुन दोस्रो साता भाइले फोन गरेको थियो- 'तेरो बाइक बिक्री भयो, नामसारी गरिदिन आइज । सकभर छिटो आउनू ।' सवारीसाधन जसको नामको ब्लुबुक होस्, चलाए हुन्छ । सवारीधनीलाई समस्या त्यसबेला पर्छ, जब त्यो कुनै दुर्घटनामा पर्छ । अझ त्यो सवारीसाधन 'लाइसेन्स' नभएकाले हाँके र दुर्घटनामा पर्‍यो भने सवारीधनी नै पक्राउ परेका घटना देख्न-सुन्न मिलेकै हो । यसैले म घर नगइ नहुने भयो । साथीहरूको आलोपालो बिदा मिलानका क्रममा मैले 'होली' मा जाने मूड बनाए पनि जान पाइएन । अलि पछि जानुपर्ने भयो ।
२०७६ चैत ७ शुक्रबारका दिन इटहरीको हलगडास्थित यातायात कार्यालयमा 'को४प २१६९' का सवारीधनी फेरिए । करिब तीन घण्टा लाग्यो नामसारीको प्रक्रिया पूरा गर्न । काठमाडौं छाड्दा अफिस र बाटामा देखेजस्ता मास्कधारी इटहरीमा कमै थिए । देख्न मिलेको कोरोना सतर्कताको कुरा- गोरखा डिपार्टमेन्टल स्टोरले प्रदेशद्धार बाहिर धारा र साबुनको व्यवस्था गरेको थियो । भित्र पस्नुअघि साबुन-पानीले हात धुनुपर्ने ।
बिहीबार मेरो साप्ताहिक बिदा परेको थियो । शुक्रबारदेखि मंगलबारसम्मका ५ दिनको बिदा लेखेर हिँडेको थिएँ । शुक्रबारै अफिसबाट खबर आयो- 'चैत १० सोमबारदेखि सरकारले लामो दुरीका सबै सवारी बन्द गर्दैछ ।' हामी जोडी नै घर गएका थियौं । दसैं-दसैंमा मात्रै घर टेक्ने जेठा छोराबुहारी समय निकालेर बीचमा आएकामा आमाबुवा खुसी हुनुभएको थियो।
मातापिताको बासभन्दा ९/१० किमि पर्तिर विराटचोकमा भाइको बसोबास छ । भाइका छोराछोरी पनि ठूलोबा-ठूलीआमा केही दिन बस्छन् भनेर खुसी थिए । लामो दुरीको यातायात बन्द भए त यतै फसिन्छ, अब के गर्ने ? हामीलाई फिर्न हतार भयो । मुल काम मोसा नामसारी थियो, त्यो भइसकेको थियो । अरू भेटघाट, खानपान र किनमेल अरू सहज हुँदाका अवस्थामा पनि गरे भइजाने हुन् ।
लेटाङबाट काठमाडौं जाने माइक्रोमा आइतबार बिहान फिर्ने टुंगो गरियो । बिहान ३ बजे नै हिड्ने टुंगो भयो । आइतबार बिहान साढे ४ बजे माइक्रोले इटहरीसम्म ल्याउँदा यात्रु ६ जना, गाडी स्टाफ तीनजना मात्रै काठमाडौं पुग्ने टुंगो भयो । बाटामा निकै कम गाडी काठमाडौं जाने भेटिए, जति देखिन्थे, उनीहरूमा पनि फाट्टफुट्टमात्रै यात्रु थिए ।
छरिएर बसेका परिवारका सदस्य कोरोनाको त्रासका बीच घरमा भेला भइरहेका थिए । हामीलाई भने कर्म क्षेत्र जानै परेको थियो । आइयो । सोमबार नियमित ड्युटी भ्याउन अफिस पुगियो । काम गरियो । अनि भोलिबाट हुने 'लकडाउन' मा घरैबाट काम गर्ने मनस्थिति लिएर गुँड आइयो ।
आफू बसेको डेराबाट निस्केर पल बाटो नटेकेको, मोटरसाइकल गेटबाट बाहिर ननिकालेको आज आज आठौं दिन हो । बिहान ८ बजे उठ्नु, नित्य कर्म सकेर एकपटक मोटरसाइकलसम्म पुग्नु, केहीबेर स्टार्ट गरेर घ्यार्र-घ्यार्र पार्नु, अनि भान्सा पसेर चिया पिउनु, ल्यापटप खोलेर बस्नु, अफिसका जिम्मेवारीमा परेका काम गर्नु, खाना खानु, टिभी हेर्नु र बेला बेला छतमा उक्लेर वरिपरि नियाल्नु गर्दै दिन बितेका छन् ।
लकडाउनले राजनीतिक परिवर्तनका बेला 'नेतालाई घरैमा बन्द' भनिएका समाचारमा आखिर कस्तो हुँदो होला भन्ने अनुभव गराएको छ । स्थितिले कोठा, चोटा, सुत्ने कोठा, भान्सा र बाथरूमबाहेक बाहिर जान नपाउनुका सकस केके हुँदा हुन् भन्ने कल्पनालाई 'यस्तो हो' भन्ने बुझाएको छ ।
हाम्रा लागि यो सकसमा पनि सन्तोष मान्ने कुरा के छ भने टेलिभिजन हेर्न पाइएको छ, एकैपटक 'युजर' धेरै 'एक्टिभ' भएर सेवा प्रदायकका सर्भर डाउन भए पनि इन्टरनेट चलाउन पाइएको छ । भलै यो इन्टरनेटले 'डायलअप' को जमाना किन नसम्झाओस्, चलेको छ । रिङ गरेपिच्छे 'कोभिड-१९' बाट बच्न 'यसो गरौं उसो गरौं' भनेर झर्को लाग्दो सन्देश बोले पनि मोबाइलले काम गरिरहेको छ ।
सामान थोरबहुत महंगै भए पनि तेस्रो-चौथो दिनदेखि डेरा नजिक डोरीको घेरा हालेर पनि किराना पसल खुलेका छन् । शायद जेलको बसाइँ यस्तै हुँदो हो । हाम्रोभन्दा जेलको बसाइ कष्टकर हुनुपर्छ । किनभने त्यहाँ आधारभूत सुविधा थोरै हुन्छन् । सरसफाइ सजिलो हुन्न । मन लगेका कुरा किनेर खान्छु भने पनि सजिलो हुँदैन ।
सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला अर्ति-उपदेशदेखि मान्छे यो प्राइभेट-लिमिटेड बसाइमा केके गरिरहेका छन्, त्यो देखिन्छ । कतिपयले यो अवस्थालाई सिर्जनाकर्ममा उपयोगी भनिरहेका छन् । उदेक उदेक छ । एक सातामा पनि बन्दी जीवनमा अभ्यस्त हुन गाह्रो परिरहेको छ ।
स्कुले बेलामा मलाइ लाग्थ्यो, संसारमा धैर्यवान कोही हुन् भने एक नम्बरमा पसले र नाइ हुनुपर्छ । म देख्थेँ-बिहान पसल खोलेर सरसफाइ गरेर ग्राहक कुरिरहेका उनीहरू बेलुकी अबेरसम्म त्यही पसलको चौघेरामै हुन्थे/हुन्छन् । त्यस्तो दिनचर्यामा मान्छे कसरी अभ्यस्त हुँदो होला ? बडा जिज्ञासा हुन्थ्यो । किन उनीहरूलाई बाहिर जान मन नलागेको होला ।
अहिले लाग्छ, उनीहरूलाई हातमुख जोर्ने उपक्रमले बाध्य पारेको रहेछ । त्यसैले उनीहरू त्यसरी बस्न सकेका हुन् । मलाइ पछिसम्म लागेको के हो भने आफू पनि त्यसरी तिनै पसले जसरी बस्न सक्छु । लाग्नु र सक्नु फरक कुरा हो । कल्पना र भोगाइ फरक पर्छन् भन्ने यो अहिलेको बन्दाबन्दीले नै अनुभव गराइरहेको छ । छोराले १२ पूरा गरूञ्जेलका दुई वर्ष म आफ्नो 'बाइलाइन' को माया गर्दिन, नेपथ्यमा रहेर काम गर्छु भनेरै पोखराको चार वर्षे बसाइलाई बिट मार्दै काठमाडौं आइयो । करिब १० महिना बित्यो, मेरो रुटिन जे गर्छु भनेको थिएँ, त्यसबाट बिचलित छैन ।
मेमोरीकार्ड र ब्याट्री छुट्याएर क्यामेरा थन्क्याएको छु । अरूले लेखेकै हेर्दैछु । क्षमतालाई 'अन्डर इस्टिमेट' गर्नेहरूलाई पनि वास्ता नगरी जिम्मेवारीमा पारिएका काम गरिएको छ । केही यस्ता साथीहरू भेटिएका थिए, जो लामो समय काठमाडौंमा काम गरेर घर फिरेका थिए । उनीहरूको 'समाचार सम्पादन' र 'पेज सेटिङ' को खुबी अति मन परेको हो । उनीहरू किन फिरेछन् भन्ने चाहिँ यतिबेला काठमाडौंको बसाइले मलाइ राम्रैसँग बुझाएको छ ।
दैनिक जिम्मेवारी, पारिश्रमिक, स्तर निर्धारण, डेराको बसाइँ । थुप्रै आयाम छन् काम गराइका जसले आशा जगाउने र निराश पनि पार्ने रहेछ । अरू जिल्लामा बसेर काम गर्नु र काठमाडौंको रुटिनमा एउटै मुल फरक हो, काठमाडौं जे चाहन्छ त्यो पस्कन्छ, अरूले त्यो ग्रहण गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता हावी छ ।
लकडाउन हट्ला र हामी पुनः नियमिततामा फिर्नेछौं भनेर यतिबेला पर्खनुको विकल्प छैन । किनभने लकडाउन काठमाडौं मात्रै होइन, पुरै देश हो र देशमात्रै होइन संसारका थुप्रै मुलुकले यस्तो अवस्था व्यहोरिरहेका छन् । प्रतीक्षाको यो दिन बिताइमा मननीय कुरा थुप्रै देखिरहेको छु ।
बच्चाहरू ठूला भएर एक्लाएक्लै बस्न रमाउने भएछन् । मोबाइलबाहेक अर्थोक नचाहिने भएछ । बाबुले घरबाटै अफिसका काम गर्नुपर्दा कम्प्युटर खोलेर एउटा कुना समात्ने, आमाका आफ्नै काम । घरमा थुप्रैजना भए पनि शून्य । आमाका घरभित्रका आफ्ना नियमित कामलाई लकडाउनले फरक पारेको छैन । भात-भान्सा, सरसफाइ आदि सधैं एकनास चल्दो रहेछ ।
बेला बेला आमालाई फोन गर्छु । भन्नुहुन्छ 'तिमीहरूलाई यतै बस्न भन्नुपर्ने रहेछ । नातिलाई पनि यतै बोलाउन पाएको भए यो डरलाग्दो स्थितिमा परिवारका सबै सँगै भइन्थ्यो, हतार छ भनेर गइहाल्यौं ।' कोरोनासँग डराएर यसरी देश बन्दाबन्दी होला भन्ने कसलाई थाहा थियो र !
यो सरकारले कुनै राजनीतिक कारणले गरेको भए चर्को विरोध हुन्थ्यो । तर यो अवस्था सबैको ज्यानको जोखिमसँग जोडिएको छ । यतिबेला हामी घर घरमा छौं, सोचनीय कुरा चाहिँ के छ भने प्रहरी, सशस्त्र र सेना सडकमा छन् । भाइरसले सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणमा विभेद गर्दैन । कर्तव्यका लागि काम गरिरहेकाहरूका परिवारमा कति चिन्ता होला ? के सोच्दा होलान् ? उनीहरू आफैं पनि यो जोखिममा कसरी मन बुझाइरहेका होलान् ?
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 1:03 PM No comments:
एक अनि शून्य - मेरो ब्लगका प्रिय पाठक, मलाई विचार र विचारको इतिहासमा रुचि छ । यही रुचिका कारण ममा पाश्चात्य दर्शनशास्त्रका केही मुख्य प्रवृत्तिलाई नेपाली भाषामा सरल रूप...
करीब चार किलोमिटर लामो सवारीसाधनको जाम छल्दै चेपचापबाट मोटरसाइकलअघि बढाउँदा खुला सडक पाउन गाह्रो भयो । तैपनि जारी यात्रामा मैले बाटो-बाट...
ब्लगमा यो फीचर अपलोड गर्दागर्दै के भनौं भने आज मेरो मेल बक्समा डा. अरुणा उप्रेतीको इमेल रहेछ । 'यो विषय आफूले पनि लेख्न चाहिरहेको भएप...
BIRATNAGAR, NOV 18 - With an intention to help female students, three graduate level students from Kathmandu University (KU) have helped c...
फट्याङ्ग्राले उखु खान थाले
मनसुन ढिलाइले फस्टाएको फट्याङ्ग्रो ( G rasshopper) का कारण सुनसरी-मोरङका उखु किसान हैरान छन् । फस्टाएका विरुवाका छानी छानी पात खाइदिन था...
एकताका लाग्थ्यो , ब्लगमा ती कुरा लेख्छु , जो खबरी कुराभन्दा भिन्न हुनेछन् । तर त्यो क्रमलाई निरन्तरता दिन सकिएन । आज फेरि यौटा लेख पढेर...